Nchịkọta Google: Trachọpụta ibe nke atọ | Martech Zone
Nchịkọta Google: ckingchọta ibe nke atọ
Thursday, August 16, 2007 Fraịde, Ọgọstụ 17, 2007 Douglas Karr
Nwere ike ịgụla na azụrụ m peeji nke na NdeDollarWiki. O ruru ego iji nyere aka na-ebugharị okporo ụzọ na saịtị m - echere m na nke a bụ nnukwu ohere maka ọtụtụ ụlọ ọrụ iji nweta obere ego na nnukwu nkwụghachi ụgwọ. Pụrụ iche ekele John Chow maka edemede echiche ahụ!
Azụrụ m email Marketing, Bloglọ ọrụ ịde blọgụ na Web Analytics peeji nke ma choro iga n'ihu igbasa ọdịnaya ka oburu ihe omuma zuru oke na ihe obula ime na Email Marketing na Corporate Blogging n'otu n'otu. Site na itinye ego otu narị, ọ bụ n'ezie ọ bụrụ na Wiki aga n'ihu na-ewu ewu.
Ezigbo ajụjụ bụ ma a ga-ahụ ya ka ọ bụ ebe a pụrụ ịdabere na ya ma ọ bụ na ọ gaghị! Ọ bụrụ na ọ bụghị, ndị mmadụ agaghị eji ya - na ọ ga-ada na-enwe ihe ọ bụla nlaghachi m ego. Ekwenyere m na ọ bara uru ịgba chaa chaa n'agbanyeghị - ọkachasị ma ọ bụrụ na m ga-emeri nke ahụ LCD na John nwere na ya zoo! 🙂
Iji 'lelee ego m anya', Achọrọ m inwe ike ịgbaso ọtụtụ ndị folks gara na ibe wiki. Obi dị m ụtọ, ndị folks na MillionDollarWiki na-ekwe ka ndị mmadụ tinye ibe ndị ọzọ na ibe ha site na iji okpokolo agba. Ntughari Wiki bụ:
webụsaịtị = http: //www.yourwebsite.com/your.html
elu = 100
obosara = 100
ókè-ala = 0
pịgharịa = mba
> / mkpokọta weebụ>
Yabụ, ịgbaso peeji ahụ dị mfe. M tinye peeji nke m saịtị nke ahụ nwere koodu nyocha Google Analytics m na ya. Edere m peeji ahụ na etiti weebụsaịtị ma debe ịdị elu na obosara abụọ na 1.
weebụsaịtị = https: //martech.zone/mytrackingpage.html
elu = 1
obosara = 1
Oge ọ bụla mmadụ bịara na ibe wiki, ọ ga-egosi na Google Analytics m. Iji hụ na m nwere ike soro ya n'adabereghị, agbakwunyela m ihe ntinye na koodu nchịkọta m iji soro peeji Wiki. Nke a bụ koodu dị na mytrackingpage.html:
Bad News na Doug si mkpakọrịta nwoke na nwaanyị Front…